Sida loo nadiifiyo taariikhdaada Safari ee iOS | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo nadiifiyo taariikhdaada Safari ee iOS
Sida loo nadiifiyo taariikhdaada Safari ee iOS
Ma ku heshay qaar ka mid ah gelisyo ceeb ah taariikhda baadhista Safari? Ama waxaa laga yaabaa inay tahay su'aal ku saabsan amniga: Ma rabto in taariikhda iPad-kaagu ay gasho gacmo khaldan, iwm.
Kaftanka Smutty gees, waxaa jira sababo badan oo sharci ah oo aad ku nadiifinayso taariikhdaada Safari ee iPhone ama iPadka. Warka wanaagsani waa in Safari ee iOS uu leeyahay qalab aad u fiican oo sidaas lagu sameeyo. Tusaale ahaan, ma ogtahay inaad nadiifin karto kaliya saacadda ugu dambeysa ee taariikhda wax raadinta, ama labadii maalmood ee la soo dhaafay?
U diyaargarow inaad barato sida loo nadiifiyo taariikhdaada Safari ee aaladaha iOS.
Sida loo galo taariikhdaada Safari
Si aad u gasho taariikhdaada wax baadhista ee Safari, kaliya taabo calaamada yar ee bookmark ee hoose ee browserka. Bar tab cusub ayaa soo muuqda. Taabo summada saacadda (taba midka ugu midig ee bartan). Haddii aad ku dheggan tahay kiiboodhka dibadda, waxaad ku dhufan kartaa ⇧⌘L si aad u furto dhinaca bidixda, oo halkaas uga sii soco.
Hadda waxaad arkaysaa taariikhdaada Safari.
Pro tip: Haddii aad gasho Bixinta Khaaska ah mode, Safari ma xasuusan doono wax kasta oo aad samayso inta la awood.
Sida loo nadiifiyo saacad taariikhda browsing ee Safari mobaylka
Taabo Clear si aad u bilowdo tirtirka taariikhda browserkaaga.
Tani waa tilmaanta aan ugu jeclahay maanta, waxayna isticmaashaa wax aan dhammaanteen isticmaalnay hadda marka aan la macaamileyno aaladaha Apple - howlaha muhiimka ah ee ku qarsoon badhamada la yaqaan. Waligay ma taaban Clear badhanka ka hor, sida aan u qaatay inay burburin doonto dhammaan taariikhdayda Safari. Laakiin maya. Taabo, oo waxaad arki doontaa liiskan:
Xitaa ma ogtahay in tani ay jirto?
Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad nadiifiso:
Taariikhdaada wax raadinta oo dhan
Kaliya taariikhda maanta
Taariikhda maanta iyo shalay
Saacadii ugu dambeysay
Waxaan si gaar ah u jeclahay ikhtiyaarka "saacaddii ugu dambeysay", maadaama ay kuu oggolaaneyso inaad tirtirto taariikhda dhow adigoo ka tagaya wax kasta oo kale.
Ka tirtir qoraalada gaarka ah ee taariikhda barowsarkaaga
Ku dhufo si aad u tirtirto, sida meel kasta oo kale oo ku jirta iOS.
Haddii aad rabto in aad ka saarto dhawr gelinta taariikhda browserkaaga, si fudud u gal liiska taariikhda sidii hore, oo mari si aad u tirtirto shay kasta oo liiska ku jira. Way fududahay.
Tilmaamaha gunnada: 3D Taabo taariikhdaada Safari
Taariikhda Browser kaliya maaha in lagu haayo xogta wax u dhimaysa isticmaalayaasha aan aqoonta u lahayn si ay si lama filaan ah u muujiyaan mar uun mustaqbalka. Waxa kale oo ku saabsan helidda boggaga aad hore u booqatay. Marka, inta aan halkan ku jirno aragtida Taariikhda Safari, isku day inaad si aad ah u cadaadiso mid ka mid ah galitaankaas (malaha inaad heshay iPhone dhawaa oo leh 3D Touch).
Haddii cadaadiska aad si sax ah u hesho, Safari ayaa soo dejin doonta horudhac boggaas. Haddii ay tahay midda aad rabto, si adag u cadaadi si aad "gu soo rogto" shaashadda buuxda, oo u wad sida caadiga ah.
Hadda tag oo baadho adigoo dayac ah, adigoo og inaad si fudud u tirtiri karto taariikhda sida sawir-qaadayaasha Stalin ay tirtireen, si fiican, taariikhda.
5ta Su'aalood ee ugu sarreeya ee suuq-geynta iimaylka ee 2019
8 Talooyin si aad u abuurto nuxur Foom-dheer leh WordPress